China Premix Glass chaplet BS6088A rụpụta na Factory | OLAN
Ekele maka iko iko ndị agbakwunyere na ihe akara ahụ, iko iko ahụ gosipụtara ọkụ ihu nke ụgbọala ahụ na onye ọkwọ ụgbọ ala, na-eme dị ka enyo, nke na-ebute nsonaazụ "ọkụ". Nke a dị oke mkpa maka nchekwa okporo ụzọ.
Akara okporo ụzọ so na usoro kachasị dị mma na nke kachasị akụ na ụba iji duzie okporo ụzọ. Ọdịiche dị n'etiti pavụ na pigmenti nke ihe e ji akanye ihe na-enye ọhụhụ pụtara ìhè nke ịgba n'okpuru ọnọdụ ìhè.
Naanị mgbe ị na-ejikọ iko chaplet nke ezigbo mma anya, akara akara n'okporo ụzọ na-aghọ ihe nchekwa nchekwa doro anya n'abalị. A na-etinye mpempe akwụkwọ iko na ihe eji akwọ ihe eji eme ihe na otu n'ime ụzọ atọ. Enwere ike ịdebanye aha ha na ngwa ihe eji eme ihe tupu etinye ha n'ọrụ, ma ọ bụ enwere ike ịdata ma ọ bụ wụsaa ha n'ime mmiri mmiri na-agbanye n'azụ agba ahụ, ma ọ bụ enwere ike ịdaba otu akụkụ nke epoxy ma ọ bụ ihe thermoplastic. Uzo a na-ekpuchi elu nke chaplet na agba ahụ, ya na ọrụ ojoo nke agba ahụ na-agbago n'elu midpoint nke bead. Nke a na-enye omume abụọ. Ọ na-ekpochi iko iko ahụ na agba ahụ ma kwe ka agba a rụọ ọrụ dị ka mbara igwe na-echegharị maka retroreleflection, na agba agba na-emetụta agba nke ọkụ a na-agbapụta. Ọkụ na-abanye na iko iko ahụ na-ehulata ma lekwasị anya na azụ azụ ahụ ma na-enwupụta azụ na ọkụ ihu na ọkwọ ụgbọ ala.
Ọdịdị: Dị ọcha, uzo, enweghị adịghị ọcha doro anya
Mejupụtara: Soda lime iko
Njupụta: 2.4-2.6g / cm3
Ntughari uche: 1.7
Gburugburu: 80% (600 <Nkebi nha <850um, * spherical chaplet> 80%)
Ọdịnaya SiO2> 68%
Isi ike (Moh): 5-7
Nke gara aga: Gbanyụọ On Glass Beads EN1423
Oghere Glass Microspheres (OLH-D)
Sandblast Glass chaplet 100 #
Sandblast Glass chaplet 40 #
Oghere Glass Microspheres (OLH-A)